Waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo Farx-Weyne WEBTOON ONLINE
Waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo Farxad Celceliska 4.2 / 5 ka mid ah 16
N / A, waxay leedahay 21K views
Shil ayaan ku dhintay anigoo eryanaya daynta aruurinta. Ka dib waxaan u gudbay buugga 'Fairy's Garden', laakiin maxaan ugu qasbanaaday in aan lahaado magaaladan ?! Aine le Peregrine, haweeney caan ah fatale waxay ahayd xariifnimada. Ka sokow dhibaateynta halyeeyga, waxay sidoo kale leedahay xiise u gaar ah oo ay ku aruuriso ragga quruxda badan. Laakiin aakhirkii, waxay ku dhimatay raggii ay soo aruurisay… Maya, sidan oo kale uma dhiman karo! Hagaag! Maanta laga bilaabo, hadafkeygu waa inaan dhaho macaan. Waxaan u baahanahay inaan si nabad ah ula dhaqmo raggaan! "Sababta aan maanta u imid duulista ma ahayn in aan joojiyo hawlgalka, laakiin in aan kuu sheego ujeedo maleh in aan joojiyo hawlgalka." … Muxuu ninkani sidan ugu dhaqmayaa? Grand Duke oo jacayl la galaya heroine ma doonayo inuu joojiyo hawlgalkeena. Kaliya isaga maahan, laakiin qofka aan la aqoonsan karin ee ah King J iyo ninka Wolves-ka ah ee keena dareenka hooyaday, Shion… marba marka dambe ee aan isku dayo inaan ka takhaluso, way sii adkaanayaan inay igu dhegaan. Miyay awoodi doontaa inay si nabdoon ula dhaqanto seddexdaas nin oo ay nolosheeda ilaasiso?!
Cutubka 34 February 9, 2021
Cutubka 33 February 2, 2021
Cutubka 32 January 26, 2021
Cutubka 28 December 30, 2020
Cutubka 27 December 25, 2020
Cutubka 26 December 16, 2020
Cutubka 25 December 8, 2020
Cutubka 24 December 2, 2020
Cutubka 23 November 26, 2020
Cutubka 22 November 17, 2020
Cutubka 20 November 4, 2020
Cutubka 19 October 26, 2020
Cutubka 18 October 26, 2020
Cutubka 17 October 13, 2020
Cutubka 16 October 4, 2020
Cutubka 15 September 27, 2020
Cutubka 14 September 22, 2020
Cutubka 13 September 17, 2020
Cutubka 11 August 31, 2020
Cutubka 10 August 31, 2020
Cutubka 9 August 31, 2020
Cutubka 8 August 31, 2020